Gumiin Mirga Namaa Kan Tokkummaa Mootummootaa Biyyoota Mirga Lammiiwwanii Dhiitan Irratti Qorannaa Geggeessuu Jalqabe
Fulbaana 14, 2020
Biyyoonni mirga lammiiwwan isaanii dhiituu fi walabummaa isaanii sarbuun himataman kan miseensota biyyoota 47 qabu marii gumii mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa torbanneen sadiif itti fufuun qorannaa cimaan kan irratti geggeessamu ta’uun beekamee jira.
Gumiin miga nama akan tokkummaa mootummootaa gaaffii biyyoonni miseensota ta’an dhiyeessan haala qabiinsa mirga namaa Beelaaruus keessaa irratti mari’achuu ajandaa duraa godhata jedhamee eegama. Biyyattiin erga filannoon prezidaantummaa wal dha’e jedhame kan Hagaya 9 geggeessamee qabee jeeqamaa jirti.
Ajjeehaan seeraan alaa kan maqaa duula dawaa sammuu adoochu irratti geggeessame jedhamee fi ajjeechaa uummata kumaan laka’amaniif sababaa ta’e keessaa prezidaantiin Filippiin Rodriigoo Dutertee harka keessaa qabu ka jedhames mata duree ijoo dha. Sana malees dhiittaan mirga namaa yeroo dheeraaf ture irratti fuuleffatamuuf jira.
Gabaasaaleen ajjeechaa, dararaa, nama utuu adda hin basin hidhuu, humnaan nama butanii miliqsuu, dararaa quunnamtii saalaa fi yakkawwan kanneen biroon biyyoota kan akka Siiriyaa, Maaynamaar, Venenzuweelaa, Sudaan kibbaa, Liibiyaa, Iraanii fi Kaamboodiyaa keessatti raawwataman illee xiinxalamaa jiran.
Abda Bosonaa Yunaaytid Isteets
Miseensonni Koree Hojii Raaw’achiistuu ABO, Obbo Daawud Ibsaa Taayitaa Hayyu-duree Irraa Uggurre, Jedhan
Walgahii Pirezdaantii Belaarus fi Raashiyaa
Ba’iin Filannoo Tigiraay Ifatti Labsame
Nootii Mallaaqa Haaraa Ka Itoophiyaa
Booranii pirez., Oromiyaa kora Gumii Gaayoo dhufetti waan hedduu himate keessattuu warrii Liiban rakkoolee hamaamtuu keessa jirra jedha
"Haalli Ayyaana Waggaa Haaraa Bara Kanaa Itti Ayyaaneffame Ka Dur Baratame Irraa Adda"